default MacOS desktop ပုံရိပ်များကိုရှာဖွေပြီးစီမံခန့်ခွဲပါ ငါက Mac ကပါ
ပုံမှန် MacOS desktop ပုံရိပ်များကိုရှာဖွေ။ စီမံပါ
Javier Porcar | | MacOS Sierra, လဲ tutorial
Mac အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုတစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop ပေါ်တွင်ရှိပုံကိုပြောင်းလဲလိုသည်။ ဤအချက်မှာသင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသိလိမ့်မည်။ မရရှိလျှင်အတိုချုပ်ရှင်းပြပါမည်။ ဒုတိယအိုင်ကွန်က desktop နှင့် screensaver။ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ပုံမှန်ပုံရိပ်များကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ပုံရိပ်တွေကိုသင်မကြိုက်ဘူး၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံတစ်ပုံကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီဟာကိုသတ်မှတ်ဖို့ဆက်စပ်မီနူးကိုသာဖွင့်ရမှာဖြစ်တယ် desktop ပုံအဖြစ်ပုံ.
ပထမ ဦး ဆုံးအရာကပါရှိသောဖိုလ်ဒါကိုဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။
ညွှန်ကြားချက်များအတွက်အပေါ်ဆုံးဘားမှာကြည့်ပါ ir. ထိုအခါ ဖိုင်တွဲကိုသွား. Keyboard Shortcut ကိုလည်း Shift + Cmd + G နှိပ်နိုင်သည်
ရိုက်ထည့်ပါ / စာကြည့်တိုက် / Desktop ရုပ်ပုံများ
နိယာမအားဖြင့်ဤဖိုင်တွဲတွင်ပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်နေရာချွေတာရန် ရည်ရွယ်၍ ဤပုံများကိုဖျက်ခြင်းသည်၎င်းနှင့်အခြား Mac အသုံးပြုသူများအတွက်မရရှိနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤဖိုင်တွဲအတွင်းရှိ desktop ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသောပုံရိပ်များကိုထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဖိုင်တွဲထဲထည့်ရန်လိုအပ်သည် ကျွန်တော်တို့ desktop image ကိုမကြာခဏပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်။ Desktop နှင့်ဖန်သားပြင်၏အောက်ခြေတွင်ဤရွေးချယ်မှုသည် system preferences အတွင်းရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်လိုချင်သည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုရယူသုံးစွဲရမည် တိကျတဲ့မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီရန်ပုံရိပ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံMac မှမဟုတ်ဘဲ iPad သို့မဟုတ် iPhone ပေါ်တွင်ဤပုံရိပ်ကိုလိုချင်ပေမည်။ ငါတို့ Mac ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ပုံကိုအမြဲတမ်းတည်းဖြတ်လို့ရတယ် ၎င်းကိုပိုမိုတောက်ပမှု၊ တောက်ပမှု၊ ပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်။ ပုံတွင်ပြထားသည့်အရာသည်ပုံရိပ်ကိုပျက်စီးစေခြင်းမပြုဘဲအခြား directory သို့ကူးယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » ပုံမှန် MacOS desktop ပုံရိပ်များကိုရှာဖွေ။ စီမံပါ
အဂူဘိုတီဂျို အယ်လ်ဘာတို ဟုသူကပြောသည်
အလွယ်ဆုံးအတိုဆုံးမှာ desktop နောက်ခံပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် desktop ပေါ်တွင်ညာဘက်ခလုပ် ((သို့မဟုတ် ctrl-click ဘယ်ညာ) ဖြစ်သည်။
Javier Porcar ဟုသူကပြောသည်
နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခု ထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
Javier Porcar အားပြန်ပြောပါ
iPad ပေါ်ရှိ Touch Bar ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပုံတူပွားစေသော application တစ်ခုကိုသူတို့ဖန်တီးသည်